ZCH-ANDIAN-DAHATSORATRA Low Point Dew Desiccant Dehumidifiers - China Hangzhou DryAir Treatment
ZCS-ANDIAN-DAHATSORATRA Low Point Dew Glove Box Dehumidifiers
ZCR andian Desiccant Dehumidifier
ZCM andian-dahatsoratra desiccant dehumidifiers
ZCLY-ANDIAN-DAHATSORATRA Four-Season Dehumidifiers
ZCH-ANDIAN-DAHATSORATRA Low Point Dew Desiccant Dehumidifiers
ZCH-ANDIAN-DAHATSORATRA Low Point Dew Desiccant Dehumidifiers Araka ny fitsipika sy ny asa ara-teknika toetra ny vatoaratra isan-karazany, misy vatoaratra dia tokony ho vokarina eo ambanin'ny toe-javatra maina dia maina, toy ny Lithium Ion vatoaratra, thermo elektrika vatoaratra sy ny Lithium fitaovana sy ny sisa. Noho izany faran'izay ambany dia ambany ny hamandoana dia indispensably dehumidify fitaovana ao amin'ny dingan'ny mpanamboatra ambony vatoaratra na fitaovana. Fahaizany sy ny fiarovana ny vatoaratra no voakasika mivantana amin'ny alalan'ny dehumidifying fahaizana ...
Supply Fahaizana: 100 Piece / Pieces isam-bolana
Port: Ningbo na Shanghai
ZCH-ANDIAN-DAHATSORATRA Low Dew Point Desiccant Dehumidifiers
Araka ny fitsipika sy ny asa ara-teknika toetra ny vatoaratra isan-karazany, misy vatoaratra dia tokony ho vokarina eo ambanin'ny toe-javatra maina dia maina, toy ny Lithium Ion vatoaratra, thermo elektrika vatoaratra sy ny Lithium fitaovana sy ny sisa. Noho izany faran'izay ambany dia ambany ny hamandoana dia indispensably dehumidify fitaovana ao amin'ny dingan'ny mpanamboatra ambony vatoaratra na fitaovana. Fahaizany sy ny fiarovana ny vatoaratra dia voakasika mivantana amin'ny alalan'ny fahaiza dehumidifying ny dehumidifier. Hangzhou Dryair Treatment Fitaovana initiatively lasa ambany ando teboka voalohany dehumidifying bateria rafitra ho an'ny orinasa tamin'ny 1998, ary afaka manome akanjo injeniera tamin'izany andro izany. ZCH andian-dahatsoratra ambany ando pas dehumidifying vondrona dia ampiasaina, ary hodinihina ao amin'ny etsy ambony fangatahana nandritra ny taona maro, dia voaporofo tanteraka ny orinasa mpamokatra entana manaraka ny teknolojia, vola-mamonjy ary afaka mampitombo soa ara-toekarena.
ZCH andian-dahatsoratra Dew Low Point desiccant dehumidifiers javatra dia avy amin'ny hihena coils, silica gel na môlekiola sivana Fanodina, dingana mpankafy, nandrafitra mpankafy, nandrafitra heater, microcomputer rafitra fanaraha-maso sy ny sisa.
Ny orinasa ihany koa dia afaka manome akanjo injeniera anisan'izany ny fanorenana efitrano paharitry. Ny Dry Room FABRICATION tetezamita ahitana efitra, fisarahana zana-kazo amin'ny sandwiched mialoha nandoko ambonin'ny vy sy ny sombin-javatra polyurethane insulation famenoana ara-nofo. Manana tombony ny rafitra voalamina tsara, tsara rivotra tightness, ary tsara ny hafanana sy ny hamandoana fanoherana fananana. Ny tany dia mifono ny tena leveling epoxy Flooring izay manana tsara koa ny hamandoana-fanoherana endri-javatra. -Paharitry efitra koa amin'ny fitaovana madio jiro, ny hery faladiany, Switches, varavarana sy varavarankely. Mba hahazoana antoka rivotra kely indrindra leakage, famolavolana manokana ny tetezamita efitra, manome rivotra sy hiverina rivotra ducts dia ampiharina ny rafitra.
Ny orinasa manome mialoha asa fanompoana, on-fivarotana sy Ankehitriny-service rafitra fampidirana akanjo injeniera anisan'izany ny fifampidinihana, famolavolana, orinasa mpamokatra entana, fametrahana, debugging sy ny rafitra fikojakojana.
ZCH Series Dew Low Point Desiccant dehumidifier (amin'ny miverina rivotra)
Process boky rivotra CMH
Supply rivotra prarmeters
External voasakantsakan'ny ny fanerena (Pa)
Misy laharana hery (KW)
Required hihena fahaiza-(KW)
Steam (kilao / h)
Electrical hiverina hazoto
Steam hiverina hazoto
ZCH-D / Z-taona 2000
T: 15 ~ 25 ℃ DPT: -60 ℃
ZCH-D / Z-3000S
ZCH-D / Z-4000S
ZCH-D / Z-5000S
ZCH-D / Z-6000S
ZCH-D / Z-8000S
ZCH-D / Z-10000S
ZCH-D / Z-13000S
ZCH-D / Z-15000S
ZCH-D / Z-20000S
ZCH-D / Z-25000S
ZCH-D / Z-30000S
ZCH-D / Z-35000S
ZCH Series Dew Low Point Desiccant dehumidifier (tsy misy miverina rivotra)
ZCH-D / Z-1500X
ZCH-D / Z-2000X
ZCH-D / Z-3000X
ZCH-D / Z-4000X
ZCH-D / Z-5000X
ZCH-D / Z-6000X
ZCH-D / Z-8000X
ZCH-D / Z-10000X
ZCH-D / Z-13000X
ZCH-D / Z-15000X
ZCH-D / Z-20000X
ZCH-D / Z-23000X
ZCH-D / Z-26000X
ZCH-D / Z-30000X
Hangzhou DryAir Ny Lafitsara:
1. Mpamatsy for miaramila Projects in Shina
Mahay noho ny fanomezana dehumidifying mpamatsy fitaovana ho an'ny National tetikasa toy ny fandefasana Satellite tena ratsy, sambo mpisitrika mampitohy, Aircraft efitra, Minesweeper Sonar trano fitehirizana, tsara sy ratsy ions collider, Nokleary Power Station, balafomanga fipetrahany izy.
2. Ny mpanorina ny Fanodina Dehumidification ao Shina.
Isika hiverina initiatively manome fototra Dry Room for Lithium Industries ao Shina, ary efa natokana ho Mihodina fototra izay ahitana ny fikarohana vahaolana, famolavolana, orinasa mpamokatra entana, fametrahana, manomboka-up, rehefa avy-fanompoana ny dehumidifying vokatra hatramin'ny 1972.
3.Strong hery ara-teknika
Ny orinasa tsy manam-paharoa na dia manana ny taratasy fanamarinana ny GJB-pirenena ny rafitra miaramila sy ny ISO9001 rafitra eo amin'ny rehetra ny fiangonana, dia ny Shina dehumidifier.
Ny orinasa tsy manam-paharoa izay manana fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny sampan-draharaha mahazo ny firenena rehetra mamela ny fikarohana ny dehumidifier fiangonana, dia ny Shina.
Ny pirenena Hi-teknolojia orinasa.
Ny zava-baovao-pirenena fototra.
4.Facility, Processing Machines sy Testing Room
R & D foibe
5. lehibe indrindra an-trano Market Share dehumidifying tsena
Miaraka efa mandroso ny teknolojia, tonga lafatra fanodinana, tsara fitantanana, Dryair ny raharaham-barotra dia hampivelatra haingana amin'ny Lithium bateria orinasa ao vao haingana taona, dia manome mihoatra ny 300 milentika ambany ando teboka dehumidifiers for Lithium bateria orinasa isan-taona, ary ny ankamaroan'ny olona any an-trano dehumidifier tsena sy ny varotra zava-dehibe lavitra mialoha ny mpifaninana hafa
Previous: ZCB ANDIAN-DAHATSORATRA Natambatra Desiccant Dehumidifiers
Next: ZCJ andian-dahatsoratra Compact Desiccant Dehumidifier
Ceiling tsoavaly Dehumidifier
Ceiling tsoavaly Duct Dehumidifier
hamandoana Removal Dehumidifier
ZC andian-dahatsoratra desiccant dehumidifiers
ZCB ANDIAN-DAHATSORATRA Natambatra Desiccant Dehumidifiers
ZCJ andian-dahatsoratra Compact Desiccant Dehumidifier